Ciidamada Kumaandooska Soomaaliya ayaa sheegay in ay dileen Saraakiil ka tirsan Al-shabaab kadib howlgal gaar ah oo ay ka fuliyeen degaanka Buulo Mareer ee Gobolka Shabeellaha Hoose.
Howlgalkan oo ahaa sida ay sheegeen saraakiisha Danab mid qorsheysan mudana laga soo shaqeynayey ayaa waxaa lagu bartilmaameystay sarakaal u qaabilsanaa tababarka kooxda Al-Shabaab oo lagu magacaabo Zubeyr Almuhaajir oo ay kooxda Al-Shabaab horey u xireen .
Zubeyr Almuhaajir ayaa waxaa uu ka qorey kooxda Al-Shabaab kutubo kala duwan oo uu ku dhaliilayey hogaankii hore ee Al-Shabaab Axmed Cabdi Godane .waxaana ka mid ahaa kutubta uu ka qorey.
1-Halkan ka Akhriso Kitaabkii uu ku dalbanayey Abu Zubeyr Muhaajir in la maxkamadeeyo Axmed Godane Amiirkii hore ee Al-Shabaab
Saraakiisha Danab ayaa sidoo kale sheegay in ay dileen sarkaal kale oo lagu magacaabo Macalin Cumar oo la socday Zubeyr Almuhaajir.
Saraakiil ka tirsan ciidanka Kumaandooska Soomaaliya ee Danab ayaa Idaacada Ciidamada Qalabka u xaqiijiyay dhismasha Labada sarkaal.
Ciidamada kumaandooska soomaaliya ee Danab ayaa dhowr mar sheegay in ay dileen saraakiil ka tirsan kooxda Al-Shabaab waxaana ka mid ahaa gudoomiyihii kooxda Al-Shabaab Cali Maxamed Xuseen (Cali Jabal) waxaana dilkiisa xaqiijiyey Al-Shabaab.
Sheegashada saraakiisha Danab in ay dileen labada sarakaal ee ka tirsan Al-Shabaab ee kor ku xusan ma jirto ilo ka madax banaan oo xaqiijinaya
Kooxda Al-Shabaab ayaan wax war ah ka soo saarin in la khaarajiyey labada sarkaal ee Zubeyr Almuhaajir iyo Macalin Cumar .
Wed, 01/10/2018 - 20:33
Ciidamada Milateriga ee JFS iyo kuwa AMISOM, gaar ahaan Ciidamada Itoobiya ayaa howlgalo ka dhan ah kooxda Al-Shabaab waxay ka wadaan deegaano ka tirsan Gobolka Hiiraan oo ay ku sugnaayeen kooxda Al-Shabaab.
Ciidamada Milateriga ee Dowladda Soomaaliya iyo kuwa AMISOM ayaa ku sheegay howlgaladooda in ay doonayaan in ay furaan wadooyin ay gooyeen kooxda Al-Shabaab wadooyinkaas oo hoos yimaada Degmooyinka Baladweyne, Maxaas iyo Matabaan ee gobalka Hiiraan .
Taliyaha Ciidanka Xoogga ee Gobalka Hiiraan Jen Tawane Axmed Gurey oo la hadlay Warbaahinta ayaa sheegay in u jeedkoodu uu yahay, sidii Al Shabaab looga saari lahaa guud ahaan gobalka Hiiraan
Madaxweynaha Jamhuuriyada Federaalka Soomaaliya oo si weyn loogu soo dhaweeyey Qardho.
Wed, 01/10/2018 - 11:49
Qardho:-Madaxweynaha Jamhuuriyada Federaalka Soomaaliya Maxamed C/laahi Farmaajo iyo wafdi balaadhan oo uu hogaaminayo ayaa gaaray magaalada Qardho ee xarunta Gobolka Karkaar , Wafdiga uu hogaaminayo Madax weynaha Jamhuuriyada Federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdulaahi Farmaajo iyo Madaxweynaha dowlada Puntland Dr,Gaas ayaa si weyn loogu soo dhaweeyey magaalada Qardho.
Wed, 01/10/2018 - 11:34
Qardho:-Madaxweynaha jamhuuriyada Federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdulaahi Farmaajo iyo Madaxweynaha Dowlad Puntland Dr.Cabdi weli Maxamed Cali Gaas ayaa waxaa la filayaa saaka in ay safar shaqo ku gaaraan magaalada Qardhoee xarunta Gobolka Karkaar.
Wafdiga Madaxweynaha jamhuuriyada Federaalka Soomaaliya Maxamed C/laahi Farmaajo ayaa aad loogu diyaar garoobay magaalada Qardho ee xarunta Gobolka Karkaar waxaan shacabka iyo masuuliyiinta Gobolka Karkaar ay wadeen maalmihii u danbeeyey diyaar garow balaadhan oo lagu soo dhaweynayo Madaxweynaha jamhuuriyada Federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdulaahi Farmaajo iyo wafdiga la socda.
Madaxweynaha jamhuuriyada Federaalka Soomaaliya Maxamed C/laahi Farmaajo aya waxaa uu ku si hakan doonaa magaaloyinka u dhexeya Garoowe iyo Qardho waxaan uu la kulmi doonaa shacabka iyo masuuliyinta Puntland.
Madaxweynaha jamhuuriyada Federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdulaahi Farmaajo ayaa waxaa sidoo kale u si rasmi ah u dhagax dhigi doonaa waddo laami ah oo isku xiri doonta Dangoronyo iyo degmada Eyl ee Gobalka Nugaal.
Dhinac kale Madaxweynaha jamhuuriyada Federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdulaahi Farmaajo ayaa magaalada Qardho uga gudbi doona magaalada Boosaaso exarunta ganacsiga Puntland waxaan uu ku hakan doonaa magaalooyinka u dhexeeya Qardho iyo Boosaaso oo si wanaagsan loogu diyaar garoobay
Tue, 01/09/2018 - 17:22
Garoowe:- Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Maxamed C/laahi Farmaajo oo maanta khudbad u jeediyey ardayda wax kabarata jaamacdaha Puntland ayaa sheegay in uu rajo wanaagsan ka qabo mustaqbalka dalka maadaama ay kordhayaan xarumaha waxbarasho ee dalka.
Mon, 01/08/2018 - 23:09
Mon, 01/08/2018 - 19:43
Xaflada furitaanka garoonka diyaaradaha Gen. Maxamed Abshir Muuse oo ka socota Garoowe.[ Live Daawo]
Garoowe:-Waxaa maanta si rasmi ah loogu daahfuray magaalada Garoowe ee xarunta Dowladda Puntland Garoonka diyaaradaha ee Garoowe oo loogu magacdaray Gen. Maxamed Abshir Muuse Airport. Garoonka ayaa waxaa loogu magacdaray Allaha Gen. Maxamed Abshir Muuse oo ahaa Taliyihii ugu horreeyey ee ciidanka Police ka Soomaaliyeed magac iyo maamuusana ku dhex lahaa umada Soomaaliyeed.
Garoonka diyaaradaha ee Gen. Maxamed Abshir Muuse Airport ayaa waxaa si rasmi u furay madaxweynaha dowladda Federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdulaahi Farmaajo iyo Mdaxweynaha dowladda Puntland Dr Cabdiweli Maxamed Cali Gaas.
Hoos ka Daawo furiraanka garoonka diyaaradaha ee Gen. Maxamed Abshir Muuse Airport
Sun, 01/07/2018 - 23:15
Sun, 01/07/2018 - 23:12
Madaxwaynaha JFS Maxamed Cabdulahi Farmaajo oo si diiran loogu soo dhaweeyey Garoowe (Masawiro)
Madaxwaynaha dawladda Puntland Dr.Cabdiwe Maxamed Cali Gaas ayaa maanta oo taariikhdu tahay 07 January 2018 ayaa waxa uu kusoo dhaweeyay magaalada Garoowe ee caasimadda dawladda Puntland Madaxwaynaha dawladda federaalka ee Soomaaliya mudane Maxamed Cabdulahi Farmaajo.
Madaxwaynaha ayaa waxaa soo dhawaynta madaxweynaha ku wehelinyey Madaxwayne ku xigeenka dawladda Puntland, Gudoomiyaha golaha wakiilada, golayaasha dawladda Puntland, maamulka gobolka Nugaal, kan degmadada, saraakiisha ciidamada, saraakiisha madaxtooyada dawladda Puntland, qaybaha kala duwan ee bulshada magaalada Garoowe.
Madaxwaynaha Jamhuriyada Federaalka ee somaliya iyo Weftigiisa ayaa waxa ay kasoo kicitimeen Magaalada Muqdisho, waxayna u yimaadeen magaalada Garoowe in ay ka qayb galaan munaasabadda 08 January oo ah sanad guuradii 4-aad ee kasoo wareegtay markii uu xilka qabtay Madaxwaynaha dawladda Puntland Dr. Cabdiweli Maxamed Cali Gaas, isla mar ahaantaana ay kaqayb qaataan xaflada furitaanka iyo xadhig jarka garoonka cusub ee diyaaradaha ee magaalada Garoowe, kaas oo dhismihiisi uu soo gebageboobay.
Madaxwaynaha dawladda federaalka ee soomaliya ayaa markii uu soo gaadhay magaalada Garoowe waxaa uu salaan sharaf kaqaatay cutubyo katirsan ciidanka Dawladda Puntland, kadib madaxwanaha ayaa mid mid ugacan qaaday madaxdii iyo dadweynihii soo dhaweeyey.
Dhinaca kale Madaxweynha Dawladda Puntland Iyo Madaxweynaha DF ee Soomaaliya ayaa waxa ay socod ku soo mareen wadooyinka waayayn ee magaalada Garoowe waxaana uu Madxwaynuha Dawladda Federaalka ah ee Soomaaliya uga mahad celiyay Madaxda iyo shacabka Puntland soo dhawaynta balaadhan ee ay usameeyeen.
Madaxweynaha Dawladda Puntland oo ka hadlay munaasibadii soo dhoweynta Mdaxweynaha DF ee Soomaaliya ayaa hadal kooban oo jeediyey waxaa ka mida ahaa:-
“waxaa maanta sharaf wayn inoo ah in aan halkaan ku soo dhawayno Madaxwaynaha dawladda federaalka ah ee soomaaliya mudane. Maxamed Cabdulaahi Farmaajo oo booqasho noogu yimi, madaxwayne ku soo dhawoow Puntland oo ku jecel soomaalinimadana jecel.
“dadka reer Puntland waxay diyaar uyihiin in ay kugu soo dhaweeyeen qalbi furan iyo gacmo furan si aad xaalada ay kusuganyihiin iyo horumarka kasocda, iyo dawladnimada ka jirta aad aragtid lana qaybsatid talooyinkaaga iyo fikirkaaga dawladnimona diyaar u ah in ay dhegaystaan ka qayb qaataan horumarka Soomaaliya iyo geedi usocodka nabadda Soomaaliya si ay Soomaaliya u gaarto qarannimo iyo dawladnimo hagaagsan,
si uu usoo noqdo nidaamkii iyo horumarkii Soomaaliya lagu aqoon jiray.
Madaxwaynuhu wuu inala jogayaa mudo dhawr beri ah wxaana uu arki doonaa dalka iyo nabada kajirta iyo weliba dawladnimda Puntland”. ayuu yiri Madaxwaynaha Puntland.
Siodoo kale waxaa isna ka mahad celiyay soo dhawayntaas madaxwaynaha dawladda federaalka ee Soomaliya.
“waxaan maanta runtii sii aad ugu faraxsanahay in aan socdaal ku joogo magaalada Garoowe ee caasimadda dawladda Puntland, mudane madaxwayne adiga iyo dawladaadaba sida sharafta leh ee wanaagsan ee aad noogu soo dhawayseen aniga yo wefdigayga waan idiinka mahadcelinaynaa.”
“laba jeer oo hore ayaan ka baaqanay duruufo jira awgeed, maanta se aad ayaan ugu faraxsanahay in aan intaas oo qof oo reer Puntland ah si wanaagsan noo soo dhaweeyaan oo jidadka taagnaadaan oo ay calamo qoyan ay nagu soo dhaweeyaan, aad iyo aad ayaan uga mahad celinaayaa aadna waan ugu faraxsanahay.
“halkaan waxaan u imi in aan ogaano xaalada halka ka jirta oo ay kaw katahay nabadda in aan xoojino aan aan ka shaqayno dib u heshiisiinta, waxaan jeclahay in aan tago dhawr magaalo oo aan dadka la kulmo, sida cuqaasha salaadiinta waxgaradka,ardayda jaamacadaha, iyo dhammaan qaybaha bulshada.aayuu yiri Madaxwayne farmaajo
ugu danabayn wefdigaan uu hogaaminayo Madaxwaynaha dawladda federaalka ee soomaaliaya ayaa maalmahaan fooda inaku soo haya sii joogi doona deegaanada Puntland.
Mashruuca balaarinta iyo dib u dhiska masjidka Dulxija ee Boosaaso [Masawiro]
Boosaaso:-Waxaa dhamaan walaalaha muslimiinta lagu wargalinayaa in ay ka qayb qaataan mashruuca balaarinta iyo dib u dhiska Masjidka Dulxija oo ku yaala magaalada Boosaaso. Masjidkaan oo horay loo dhisay sanadkii 1999, ayaa hadda balaarin iyo dib u dhisid lagu samaynayaa.
Waxaana maantay ay soo bandhigeen gudiga ku howlanaa dib u dhiska masjidka qarash lagu qiyaasay inuu galayo, waaana: 300,000$ (sadex boqol ookun oo doolar).
Hoos ka eeg Wixii faah faahin ah kala xiriira numbarada hoos ku qoran .
Sun, 01/07/2018 - 13:36
Madaxwaynaha dawladda Puntland Dr.Cabdiweli Maxamed Cali Gaas ayaa maanata oo taariikhdu tahay 05 January 2018 soo kormeeray Garoonka diyaaradahaa magaalada Garoowe oo dhismihiisu soo gaba-geboobay.
Madaxwaynaha dawladda Puntland ayaa ugu horayn soo kormeeray dhammaan dhismaha garoonka, isagoona Madaxwaynuhu dul istaagay qaybaha uu ka koobanyahay garoonka cusub, madaxwaynaha, ayaa xog waraystay shaqaalaha ka shaqeeya dhismahaasi, sidoo kale Madaxwaynaha ayaa ku amaanay masuuliyiinta wasaarada duulista iyo hawda ee puntland sida wanaagsan ee ay uga soo baxeen shaqadii loo igmaday, isla markaana waxaa uu Madaxwaynuhu xaqiijiyay in garoonka loo dhisay sidii uu qorshuhu ahaa ee loogu tala galay, madaxwaynaha dawlada puntland ayaa sheegay in dhismaha cusub ee garoonka xadhiga laga jari doono 08 january 2018.